I-Biography yoMculi wezwe uNeal McCoy
Konke malunga neeritones ezidumileyo zelizwe
UHubert Neal McGaughey, uJr. wazalwa ngoJulayi 30, 1958, e-Jacksonville, eTexas. Uyise uvela e-Ireland kwaye unina ungumPhilippines. Abazali bakhe babephulaphule umvumi womculo kwaye baveze uMcCoy kwiindidi ezahlukeneyo zomculo ezikhulayo, kuquka nelizwe , iR & B , i- disco ne- jazz . Wahlabelela ecaweni yecawa, kodwa xa ilizwi lakhe lithe lavela kwisiginci sakhe sesiginci, wayigqiba ukunikela ingoma kwiqela le-R & B.
Kungekudala ngaphambi kokuba abuyele kumculo welizwe, enze kwiiklabhu kunye nemigoqo ecaleni kweTexas.
UMcCoy waya kwikholeji encane kufuphi ne-Jacksonville waza wasebenza kwivenkile yokuthenga i-foot shop, apho wadibana nomkakhe, uMelinda. Batshata ngo-1981. Ngaloo nyaka, wanqoba umdlalo weetalente owabanjelwa ngumculi wezwe uJanie Fricke, owamncedisa uMcCoy ukukhusela indawo kwiholide likaCharley Pride njengento yakhe yokuvula. Wamkela igama lesigcawu uNeal McGoy , okuyigama lokupelisa ngefonetiki yegama lakhe lokugqibela.
UMcCoy wenza ukuthuthela eNashville ekupheleni kwee-80s kwaye wasayinwa nelebula ezizimeleyo ngoku, i-16 Avenue Avenue ngo-1988. Wakhupha ii-singles ezimbini phantsi kwileyibhile, kwaye akukho nto eyayiye yabetha. Waqhubeka nokuvula u-Pride kwaze kwaba ngo-1990. Ngaloo nyaka, watyikityha neAtlantic Records, waguqula igama lakhe lesigcawu kuMcCoy waza wakhulula i-albhamu yakhe ye- At This Moment . Akukho nanye kwiingoma ezintathu ze-albhamu eziye zaphazamisa ilizwe eli-Top 40, kunye nomzamo wakhe wokunyamekela, ngo-1992 apho Kuqala ukuqala , kwenziwa ngokufanayo.
Waqhubeka ekwenza kwaye wahlakulela udumo lwakhe lobungqina, obukhulu bendawo.
Ngo-1994 Akunakho ukungaqiniseki Ngaloo nto kwazisa uMcCoy inhlanhla. I-albhamu yahamba iplatinum, kwaye ithrekhi yecandelo kunye ne "Wink" enye yeeNombolo 1 zelizwe leBillboard lihlaba. UMcCoy wayebethe inhlanhla kwaye wayesebenza ngokusemthethweni inkwenkwezi.
Ulandele ngo-1995 kunye ne- Got Got Love , eyayihamba ne-platinum, kwaye yavelisa ezintathu zeeNombolo ezi-3: i-track title, "Ukutshintsha" kunye ne "They Play '' Ingoma yethu." Izabelo zaqala ukuhla emva kokukhishwa kwe-albhamu yakhe yesi-studio ye-studio, uNeal McCoy . Ngowe-1999 Ubomi beqela abuzange luncede umzamo. Naphezu kwegama layo, kwakuyi-albhamu ye-ballads kunye neengoma ze-pop pop soft.
Emva kokuhlukana kwe-Atlantic yeNashville ngo-2000, uMcCoy wasayinwa kunye neeRekodi zeGiant and wakhupha u- 24-7-365 ngaloo nyaka. Ukuthengisa kwakusasaza. Ngelishwa, iiRekodi ezinkulu zivalile iingcango zabo kwaye uMcCoy wathuthela kwi-Warner Bros Records. Wawubhala uMntu oyiLuckiest in the World kwaye wakhulula umzila wecandelo njengomntu omnye, kodwa i-albhamu yayisisigxina.
Yena kunye nomphathi wakhe, uKaren Kane, wasungula iileyibrari ezizimeleyo 903 Umculo ngo-2005. "UBilly Ufumene Ubhiya Bakhe Ngobunzima" waqhekeza i-Top Ten kwi-charts yelizwe waza wakhonza njengomntu osisigxina soBomi . Ngo-2006 wakhululwa apha kunye no-Now , owakhupha i-Top 40 ibetha: "Nothin 'Kodwa Uthando Thang" kwaye "Ndandibuya Kwimfazwe." Ngomnyaka olandelayo, uMculo we-903 ufakwe kwi-bankruptcy kwaye ivaliwe.
UMcCoy wasayina kunye noBlaster Music ngo-2011 waza wakhulula i-albhamu yakhe yesibini, i- XII , kunyaka olandelayo.
UBlake Shelton noMiranda Lambert basize umveliso kwaye bahlabelela ukugcinwa kweso sokuqala kwi-"OK-OK". Wabuyela ngo-2013 ngokuziqhenya , i-albhamu yentengiso kwi-Charley Pride. Abaculi belizwe labanye baseDarius Rucker noTrace Adkins bavela kwi-albhamu. UMcCoy akakhange akhululwe nantoni na, kodwa uyaqhubeka nokuphila.
Ubomi bomntu siqu kaNeal McCoy
UMcCoy nomkakhe, uMelinda, sele batshatile iminyaka engaphezu kwe-30. Unabantwana ababini: unyana kaSwayde nentombi kaMiki. Indoda nomfazi basungula i-East Texas Angel Network ngo-1995, enika uncedo lwemali kwiintsapho kunye nabantwana abahlala nezifo okanye izifo ezisongela ubomi. Umbutho uye wakhulisa ngaphezu kwezigidi ezigidi zeedola.
Kulo Mzuzu (1990)
Kuqala Kuqala (1992)
Akukho Ukungaqiniseki Ngayo (1994)
Ufumene Uthando Lwa (1995)
UNeal McCoy (1996)
Yiba Ngileyo Kuyo (1997)
Amanqaku amakhulu (1997)
Ubomi beqela (1999)
Ukuziqhenya: Umvuzo kwi-Charley Pride (2013)
Ukukhuphela / Ukuthenga "U-Billy Ufumene Ubhiya Bakhe Ubungqingili"
Ukukhuphela / Ukuthenga "Wink"
Ukukhuphela / Ukuthenga "I-Shake"
Ukukhuphela / Ukuthengwa "Akukho Ukungaqiniseki Ngayo"
Ukukhuphela / Ukuthengwa "I-Rednecktified"
Ukukhuphela / Ukuthenga "Badlala 'INgoma Yethu"
Bob Dylan Kwiimifanekiso
Abafazi abalulekileyo kwiMculo yesiGaba
UDaryl Hall noJohn Oates
Ukuba uthanda u-Edith Piaf, Unokungafani nalaba baphathi kunye neengoma
Ukulanda iingoma zesiJamani ezivela kwi-iTunes
UThixokazi oThathu: uMama, uMama kunye neConone
Ngaba Ukubetheka KwamaPolymer Kuya Kubi?
Ukubeka iLammas yakho (Lughnasadh) Altar
Ukuqikelela ukuBonakala kombala kunye ne-Autumn Leaf Display
I-Ozone: Okulungileyo kunye Okubi kwe-Ozone
Ukuqondisisa nini kunye nendlela Ukuguqulwa kweFrench kuphelile ngayo
Triassic: I-Jurassic Mass Extinction
'Phu laphula iRadio' ngesiFrentshi yi-'Ecouter la Radio '
Sisiphi Isivakalisi seSigwebo?